विवाहित जोडिलाई हप्तामा कतिपटक सेक्स गर्नु उचित ? - Saptakoshionline
विवाहित जोडिलाई हप्तामा कतिपटक सेक्स गर्नु उचित ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख १९, २०७६ समय: १४:२७:३७
कुनैपनि व्यक्तिको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनका लागि सेक्सको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्ध मात्रै होइन यसले दुई जनाबीचको समझदारी र सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउने काम गर्छ । जसले गर्दा खुशिले भरिएको जीवन विताउन पनि मद्दत हुन्छ । हालै गरिएको एक अध्ययनमा जोडिकाबीच इन्टिमेसीको अध्ययन गरियो र त्यसमा देखिएको निकै नतिजाले आश्चर्यमा पारेको छ ।
वर्षमा ५१ पटक सेक्स
आर्काइभ्स अफ सेक्शुअल बिहेवियरमा प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार, एक जना विवाहित जोडीलाई वर्षमा ५१ पटक यौन सम्बन्ध राख्नु पर्ने हो । यसको मतलव हप्तामा एक दिन अनिवार्य सेक्स गर्नु राम्रो हो ।
वर्षैपिच्छे यौन सम्बन्ध गर्नेको संख्यामा कमि
सन् २००० र २००४ को बिचमा भएको एक अध्ययनले विवाह भइसकेका जोडी जति पटक यौन सम्बन्ध राख्छन् त्यस संख्यामा कमी आएको देखाएको छ । वर्षे पिच्छे यौन सम्बन्ध राख्ने जोडीको संख्यामा कमि हुँदै गएको अध्ययनले देखाएको हो । लगभग दुई दशक पहिलेको तथ्यांकको तुलनामा जोडिहरु अब ९ गुना कम यौन सम्बन्ध राख्ने गरेका छन् ।
के भन्छ अन्य अध्ययनले ?
शिकागो विश्वविद्यालयद्वारा गरिएको अध्ययन द सोशल अर्गनाइजेशन अफ सेक्शुएलिटीः सेक्शुअल प्रैक्टिसेजÞ इन द यूनाइटेड स्टेट्स’ मा पनि निष्कर्ष निकालिएको छ की, लगभग एक तिहाई कपल्स हफ्तामा दुईदेखि तीन पटक सम्म सेक्स गर्छन्, जबकी केहि कपल्सले भने महिनामा एक वा दुई अथवा तिन पटक मात्र सेक्स गर्ने गर्छन् ।
हफ्तामा एक पटक भन्दा बढि सेक्स गर्नाले के हुन्छ ?
जर्नल अफ सोशल साइकोालोजिकल ऐन्ड पर्सनेलिटी साइन्समा प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार जो कपल सातामा एक पटक यौन सम्पर्क गर्छन्, उनी ती कपलको तुलनामा बढि खुशि हुने गरेका छन् वा एक पटक भन्दा बढि इन्टिमेट हुन्छन् ।